Huacheng Hydraulic လြှပျစစျ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ဟိုက်ဒရောလစ်ပါဝါပူးတွဲ huacheng Yuyao ။ , LTD မှ။ တရုတ်များ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပွင့်လင်းတက်လာခဲ့သည်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ 23 နှစ်ရှိပြီစေရန်, ပင်လယ်ရပ်ခြားမှတင်ပို့ 20% သောဦးထက်ပို 1000 မှတက်၏နှစ်ပတ်လည် output ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသည်, thermosetting ပစ္စည်းများရော်ဘာစက်, ရော်ဘာ vulcanizing စက်, ရော်ဘာဆေးထိုးစက်အပါအဝင်ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအစု, ဖွဲ့စည်း ရော်ဘာစက်, ရော်ဘာစက်ပစ္စည်း, ရော်ဘာဆေးထိုးပစ္စည်းကိရိယာများ, လေဟာနယ် vulcanizing စက်, BMC ဆေးထိုးစက်, အရည်ဆီလီကွန်ထိုးစက်, ရော်ဘာဟိုက်ဒရောလစ်တန်ဆာစက်, ရော်ဘာဆေးထိုးတန်ဆာစက်, ရေနံတံဆိပျကိုလေဟာနယ် vulcanizing စက်, etc, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် huacheng စက်တစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရှိပါတယ် ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒီဂရီ၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစဉ်ဆက်မပြတ်, အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်အသင်းနှင့်အယူအဆမိတ်ဆက်ထိုင်ဝမ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်, ဂျပန်, ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာထက်ပိုလူ 10 နှင့်အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများတပ်ဆင်ထားသည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး, သင့်လျော်သော, တည်ငြိမ်မှု, အလိုအလျောက် မှစ. , ပစ္စုပ္ပန်မှာလုံခြုံရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, etc, အပြည့်စုံမြှင့်တင်ရေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအများကြီးအားလုံးနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းများနှင့်ပြည်တွင်းနာမည်ကျော်လုပ်ငန်းများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့် ပို. ပို. High-end ခံစားပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု၏ရှုထောင့်ရှိနေကြသည်ကိုငါတို့သကိုလိုက်နာ ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှု၏နိယာမ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်၏သော့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်: တကောင်းသောအဟောင်းဖောက်သည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်, 2. ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာကောင်းသော Be; သုံးထုတ်လုပ်မှု, ကျွန်တော့်ကို 23 နှစ်ကျနော်တို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးသောအနေအထားအတွက် client များ '' လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထား, ယနေ့ huacheng အမှတ်တံဆိပ်တည်ရှိ, ငါ၏ကုမ္ပဏီထက်ပိုတစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ဖောက်သည်လို, ယနေ့ huacheng ကုမ္ပဏီတိုအများအပြားဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုအနေဖြင့်သိကြ အရပျ၌ဝန်ဆောင်မှု။
စက်မှုလုပ်ငန်းမှာများစွာသောကျော်ကြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့, ထက်ပိုမိုအနှစ်နှစ်ဆယ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပစ္စည်းများ thermosetting သို့ကြှနျုပျ၏ကုမ်ပဏီကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ဖြစ်ပါသည်, ဤကဲ့သို့သောလျှပ်စစ်, ထက်မြက် BMW ကား, ဂျပန် Jiangsu Jiang လျှပ်စစ်ပစ္စည်း wolong မြင့်မားတဲ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, Gree လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, haier လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, အဖြစ်နှင့် ဤမျှလောက်များစွာသောကြွယ်ဝသောနေ့၌, အထူးသဖြင့် Gree လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်စီမံကိနျးအတှကျ, စာမေးပွဲ၏တင်းကျပ်သောနီးပါးကို 10 ကြိမ်, စစ်ဆေးခြင်း, ဆက်သွယ်ရေး၏သုံးသပ်ချက်ကိုတောင်းဆိုနေတာအသုံးပြုပုံနဲ့နောက်ဆုံးမှာလေလံအနိုင်ရအောင်မြင်သောဖြစ်ပါသည်, Gree လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအလိုအလျောက်ဦးဆောင်အဖွဲ့တညီတညွတ်တည်းအဆင်သင့်မှတ်ချက် get ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ Gree အလိုအလျောက်စီမံကိန်းကိုကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမားစရိတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ငွေထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အမျှပစ္စည်းကိရိယာများ၏လိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, အလိုအလျောက်, တည်ငြိမ်မှု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါသည်, မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း၏စုစုပေါင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုလည်းစစ်ဆင်ရေး၏နှစ်သိမ့်မြင့်မားတောင်းဆိုမှုကိုရှေ့ဆက်ထား, ဒီခြုံငုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် ပစ္စည်းကိရိယာ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏အစီအစဉ်။
လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, ငါ၏ကုမ္ပဏီ, အစဉ်မပြတ်အဖြစ်အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးန်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်, နောက်ထပ်ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ဖောက်သည်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကိုဖြည့်စွက်ဖို့ဆိုတာသေချာဖို့ပိုပြီးပြည့်စုံအလှည့်-key ကိုစီမံကိန်းပြီးမြောက်။ နှင့်တက်ကြွစွာ, ရော်ဘာထုတ်ကုန်များနှင့်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများ၏စက်မှုလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်း thermosetting ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုစုံလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖောက်သည်များ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုနားထောင်ရန်, ငါတို့အရည်အသွေးကို Level ဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ငံခြားနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏နိဒါန်း, ကိုစုပ်ယူ ရော်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ high-end အမှတ်တံဆိပ်၏ thermosetting ပစ္စည်းတန်ဆာပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းစ huacheng ။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှငျ့လမျးညှနျအတှကျအကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီအားလုံးကိုဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများဖိတ်ခေါ်, ငါတို့ကုမ္ပဏီပိုကြီးမြှင့်တင်ရေးပေးပါ။